कुलमान घिसिङको प्रश्नः कोरियनसँग एउटा पीपीए हुँदा हंगामा हुनुपर्ने किन ? |
कुलमान घिसिङको प्रश्नः कोरियनसँग एउटा पीपीए हुँदा हंगामा हुनुपर्ने किन ?
07:53:59 | मुख्य समाचार राष्ट्रिय
अपर त्रिशुली-१ को पीपीए डलरमा भयो भन्नासाथ विवाद आयो । यो पीपीए (विद्युत खरिद सम्झौता) मा कसैले बोल्ने बाटै छैन । चाइनिज वा अरु डेभलपर्सले नै भन्नुस्, कसैले बोल्ने बाटो नै छैन । यो मोडलमा आउँछन् भने जति पीपीए गरे पनि जोखिम छैन ।
लगानी, डीपीआर सबै तयार छ, भोलि नै सुरु हुन सक्छ । सबै चिज तयार छ, अब तिमी जाउ भन्ने हामीले रु कि पीपीए नै नगरौं भनौं रु के नेपाली रुपैयाँमा पीपीए हुन्छ, आउने भए आउ नआउने भए नआउ भन्नुपर्‍यो । होइन भने यति त गर्दिनुपर्‍यो नि !
अनि त्यो लागत हेरेर साध्य हुन्छ ! उसको लागत कहाँरके भनेर सबै हेर्न हामीलाई सम्भव पनि हुँदैन । उसले जे लागत ल्याउँछ त्यसैमा १७ प्रतिशत प्रतिफल दिने भन्नासाथ त उसले त लागत बढी नै ल्याउँछ अनि मैले १२-१३ सेन्ट दिने त ? दिन सक्छु त ? हाम्रो आफ्नो क्षमता त छैन । त्यसो भएपछि मैले जे दिन सक्छु, त्यसमा आउनेमात्रै आउ भनेको हो ।
मोडल हाम्रो पनि त्यही हो । ‘कस्ट प्लस’ मा त त्यसको उनीहरूले नियन्त्रण उनीहरूले गर्न सक्नुपर्‍यो नि ! डेभलपर्सले जे दियो, त्यही भएपछि अनि हुन्न त महंगो रु एउटा कुनै डेभलपरले हाइड्रोपावर बनायो, १५ करोडलाई ३० करोडमा बनायो ।
‘कस्ट प्लस’ मा गरेर साध्य हुन्छ, सम्भव छ रु छैन । हामीले दिन सक्ने दर दिने हो । तसर्थ अहिलेको पीपीएमा कुनै जोखिम छैन ।
अब डलरमा पीपीए ! यदि यो पनि नगर्ने हो भने गर्ने के त !अब एफडीआई भन्ने, त्यसका लागि डलर त चाहिन्छ । कपतिमा बैंकको ऋण त तिर्नुपर्‍यो । बैंकको ऋण पनि म तिर्दिनँ, डलर पीपीए गर्दिनँ, नेपालीमै पीपीए गर्छु भन्ने हो भने त ढोकै बन्द गरेर बसे भैहाल्यो नि ! यो जति अधिकतम कति आउन सक्छ, त्यो हेरौं । यो सम्भव छ । म त भन्छु यसले ठूलो ढोका खोलेको छ ।
खिम्तीको पाटोमा ‘अनलिमिटेड स्क्यालेसन’ छ । अमेरिकाको उपभोक्ता मूल्य सूचकांकलाई हेरेर प्रत्येक वर्ष त्यो बढ्दै जान्छ । वार्षिक २र३ प्रतिशतको हाराहारीमा बढ्दै जाँदा अहिले यो विन्दुमा पुगेको हो ।
क्यापासिटीमा पीपीए गरेपछि र त्यो पनि फ्ल्याट भएपछि २४ लाख डलरबाट बढ्दै गएर महिनाको ३२र३३ लाख डलर पुगेको छ । यो करीव ३२र३३ करोड जति पुग्ने भयो । यति भएपछि बर्खामा इनर्जी चैं बढ्ने भयो । बढी इनर्जी भएपछि बर्खामा कम लोडसेडिङ हुने भो । तर, हिउँदमा त स्वात्तै घट्ने भयो । थोरै इनर्जी भाग गर्नुपर्ने भएपछि बढी रेट आउने भयो । खिम्तीको बिजुलीमा २५ सेन्टसम्म आउनुको कारण यही हो ।
यत्रो प्रक्रिया पूरा भएको छ, फेरि अर्को प्रक्रिया गर्न त मन्त्रिपरिषद् नै जानुपर्छ, त्यसरी सम्भव नै छैन भनेपछि उनीहरू बाध्य भएर आएको स्थिति हो । अहिले के पनि प्रचार गरियो भने अपर त्रिशुली-१ मा २१६ मेगावाटलाई ६० अर्ब लागत लगाएर त्यत्रो लागतमा डलर पीपीए गर्ने ?
त्यसमा पनि अहिले हामीले के गरेका छौं भने अहिले तिमीहरूको लागत हामी हेर्दैनौं । यो ४.८० र ८.४० भनेको हाम्रो अधिकतम दर हो । तर, १७ प्रतिशत ‘रिर्टन अन इक्विटी’, त्यो कार्यविधिमा नै छ ।
त्यसभन्दा बढी निर्माण सम्पन्न भएपछि, फाइनल ब्यालेन्स सिटमा आउँदा उसको दर ६० अर्ब भनेको ठाउँमा ४० अर्ब वा ३० अर्ब सकियो भने हामी हिसाव गर्छौं- त्यसमा १७ प्रतिशत ‘रिर्टन अन इक्विटी’ आयो कि आएन रु वित्तीय मोडल त प्रष्ट छ । त्यसमा १७ को ठाउँमा १८ प्रतिशत आयो भने त्यसको दर घटाउँछौं भनेका छौं, त्यो हामीले प्रष्ट लेखेका पनि छौं ।
‘डाउनवार्ड डिक्रिज’ पनि छ त्यहाँ । नेपाली डेभलपर्सले भन्दा कम्पनी पनि पाउन सक्छ त्यहाँ । अहिले सबैलाई लागू गरिदिएको छ । अहिले कुनै आयोजना एकदमै सस्तो हुन्छ । अहिले कुनैलाई त यस्तो आपत् परेको छ १७ प्रतिशत भनिएको छ, ४.८० र ८.४० हिसाव गर्‍यो, २२-२५ प्रतिशत पुग्छ ।
दरकै कुरा गर्दा पनि अहिले औसत ५.८०- ५.८८ रुपैयाँ जति पर्छ । यसको मतलव ६ सेन्टजति पर्न आउँछ । ४.८० र ८.४० दर हो । त्यो नेपालीकै रेट हो, जे भन्यो त्यही रेट हो ।